June 2019 - Page 2 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
Garoowe-(Puntland Mirror) Diktoor Saalax Xaaji Cabdullaahi oo ahaa dhakhtar caan ah oo ku takhasusay lafaha ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Diktoor Saalax ayaa isbitaalka lafaha ee ugu weyn Puntland ku lahaa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha mamaul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa sheegay in uu gabi ahaanba burburay heshiiskii u dhaxeeyay Galmudug iyo Ahlu Sunna. Bayaan uu soo saaray xalay goor dambe, ayaa madaxweyne Xaaf ku […]
Guddoomiyihii maxkamada sare ee dowladda Puntland Yuusf Xaaji Nuur oo ku geeriyooday dalka Turkiga
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii maxkamada sare ee dowladda Puntland Yuusf Xaaji Nuur ayaa ku geeriyooday maanta oo Axad ah dalka Turkiga. Bilihii u dambeeyay, Yuusus ayaa xanuunsanayay, sida dad eheladiisa kamid ag ay u sheegeen bog […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa saddex nin ku xiray magaalada Gaalkacyo, sida ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Saddexda nin ee la xiray ayaa kamid ahaa niman horaantii bishaan […]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Madaxweynihii maamul goboleedka Amxaarada ee dalka Itooboya ayaa la dilay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Itoobiya. Ambachew Mekonnen iyo la tayilihiisa ayaa lagu dilay isku day afgembi oo ka dhacay caasimada maamul goboleedka […]
June 22, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda batroolka iyo macadanta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heshiis shidaal la saxiixatay shirkadaha Shell iyo Exxon Mobil 30 sanno kadib, sida uu sheegay masuul katirsan dowladda. Wasiirka ku xigeenka wasaaradda batroolka iyo macadanta […]
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Shirar u dhaxeeya masuuliyiinta sare ee maamul goboleedka Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, sida ay sheegeen ilo-wareedyo halkaas ku sugan. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda […]
June 20, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Carabta ayaa taageeray midnimada iyo xuduudaha dalka Soomaaliya. “Baarlamaanka Carbeed waxa uu taageerayaa Jamhuuriyadda Soomaaliya si loo dhowro midnimadeeda, nabadgelyadeeda, deganaanshaheeda, bedqabka dhulkeeda, xorriyadeeda, milgaheeda, beri, bad iyo cir,” sidaa ayaa lagu […]